हिमाल खबरपत्रिका | जोखिममा चार प्राचीन मूर्ति
जोखिममा चार प्राचीन मूर्ति
काठमाडौं तिलगंगाको दहमा आधा डुबेर रहेको नेपालको पहिलो अभिलेख सहितको विष्णुविक्रान्तको मूर्ति
नेपालका प्राचीन मूर्तिहरु अहिले कहाँ, कतिर कुन अवस्थामा रहेका छन् भन्ने तथ्यांक कसैसँग छैन । तर, माटो, काठ, ढुङ्गा तथा विभिन्न धातुबाट बनेकाती मूर्ति प्राचीन नेपालका प्रामाणिक मुखपत्र हुन्।
प्राचीन कालमा नेपाली सभ्यताको परिचय बोकेका ती मूर्तिले नेपालको ऐतिहासिक गौरवगाथागाउन सक्षम छन् । यसरी नेपालको इतिहास, सभ्यता, धर्म र संस्कारको अभिलेख किन राखिँदैन या त्यो काम गर्न कसले रोकेको छ ? जनमानसमा ज्वलन्त प्रश्न उठिरहेका छन् ।
विसं २००७को दशकमा नेपालका प्राचीन सम्पदाका रुपमा रहेका असंख्य मूर्ति चोरी भए । त्यो शृंखला आज पनि रोकिएको छैन । तर घटना लुकाइन्छन् । इतिहासविद्हरुलेअझै पनि उपत्यकाका केही मूर्ति चोरीको जोखिम नै रहेको औंल्याएका छन् । यसो भनिरहँदा उनीहरुलाई डर छ, यसमा कतै सम्पदा संरक्षकको भन्दा पहिलो नजर तस्करहरुको पर्‍यो भने !
मानदेवकालीनमूर्ति तीलगंगाको दहमा
नेपालको सबैभन्दा पुरानो र एक मात्र सिङो
गजलक्ष्मीको मूर्ति, फलामे घेरामा
इतिहासका पाना पल्टाएर कसैले नेपालको पहिलो अभिलेख सहितको मूर्ति कुन हो भनेर खोज्यो भने राजा मानदेव प्रथमको विष्णुविक्रान्तको मूर्तिलाई पाउँछ। त्यस वेला राजा मानदेवले विष्णु विक्रान्तका दुईवटा मूर्ति बनाएका थिए । जुन मूर्तिको आकार, बनावट र अभिलेख दुरुस्तै छ । त्यही वेला बनाएका दुई मूर्तिमध्येएउटा लाजिम्पाटको धोवीचौरमा र अर्को पशुपति तिलगङ्गामा राखिएको थियो । २०१६ सालमा लाजिम्पाटको धोवीचौरमा अलपत्र परेको उक्त मूर्ति चोरीनिकासीको डरले आफैले अपहरण गरेर राष्ट्रिय संग्रहालयमा पठाएको संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीसुनाउँछन् । (हेर्नूस् बक्स)पुरातत्व विभाग तथा संस्कृति विभागको निर्देशक हुँदा जोशीले आफै रातको समयमा सुटुक्क मूर्ति उठाएरवीर पुस्तकालयमा केही समय राखी पछि छाउनी संग्रहालयलाई सुम्पिए ।
विष्णुविक्रान्तको दुरुस्तै मूर्ति त्यस समय पशुपति तिलगंगामा पनिथियो । आज पनि त्यहीं छ । तर भित्रिबाटो गल्ली भएर जादाँ दायाँ झाडी तिर एक चौथाई पानीको दहमा डुवेको स्थितिमा छ । “अहिले पूरै बेवास्तामा रहेको मूर्ति कुनै पनि समय त्यो चोरी हुने उच्च जोखिममा छ,” सम्पदा संरक्षक रवीन्द्र पुरीभन्छन्, “यहाँ कुनै सुरक्षाका लागि न त स्थानिय जुझारु छन्, नसिसि क्यामेरा नै जडिएको छ ।”
यस मूर्तिको महत्वबारे धेरैजसोस्थानिय बेखबर छन् । ४६ वर्षदेखि मूर्ति रहेकै जग्गामा बस्दै आएका विन्देश्वर ठाकुर मूर्तिलाई बाटोमा देख्दा ढोगेर हिड्ने गरेको बताउँछन् । उनि भन्छन, “यहाँ कसैलाई यस मूर्तिबारे राम्रो जानकारी छैन । फेरि यो सुकुम्वासी क्षेत्र पर्छ । आफैकति वेला लखेटिनु पर्ने हो, मूर्तिलाई के सुरक्षा दिनु?”
राजा, राजमाता (मानदेवकी आमा)र संवत्उल्लिखितपहिलो अभिलेख हो, विष्णुविक्रान्तको मूर्ति। विडम्बना, पाँचौँ शताब्दीको काव्यिक शिलालेख र मूर्तिले बोकेको इतिहास दहमा भासिनुले हाम्रो सम्पदा संरक्षणको चेतलाई उदांगो पारिदिएको छ । साथै मूर्तिको हराउने जोखिम उत्तिकै छ ।
हजार वर्ष पुरानो मूर्तिलाई फलामे घेरा !
चोर्ने प्रयास भइरहने साँगाका वासुकी नाग
पाटनको च्यासलहिटीकोकुनामा लक्ष्मीको एउटा ढुङ्गेमूर्ति टक्क उभिएकोछ । यसलाई पहिलो झलकमै स्त्रीमूर्ति, दोस्रो हेराइमा देवीको मूर्ति रतेस्रो हेराइमा गजलक्ष्मीभनेर ठम्याउन सकिन्छ । यो मूर्तिले गोडामा लगाएको ठूलठूला डुनटजस्तो रोटीको आकारको कल्ली लगाएको छ ।
मूर्ति २१ सयदेखि २२ सय वर्ष पुरानो मान्न सकिने मूर्तिकलाका विद्वान् लैनसिंह वाङ्देलले ‘एन अर्ली स्कल्पचर अफ गजलक्ष्मी फर्म पाटन’नामक लेखमा उल्लेख गरेका छन् । यस आधारमा नेपालमा अहिलेसम्मको सबैभन्दा पुरानो र पूर्ण सग्लो प्रमाणित मूर्ति यहीहो । तिनवर्षअघि उक्त मूर्ति ढुङ्गेधाराको कुनामा लडेको थियो । “त्यो त्यहाँबाट कसैले उठाएर लगेको भएपनि कसैलाई हेक्का हुने थिएन,”सम्पदा संरक्षक पुरी भन्छन्,“मूर्तिको विजोक भएरै मैले स्थानियलाई यथास्थानमा सुरक्षित राख्न आह्वान गरेँ ।”
पुरीको अगुवाइमा टुङ्गेधारा सरसफाई र मूर्तिलाई छेकवार गरिने काम भयो । तर अहिले पनि यस मूर्ति चोरीहुन सक्ने जोखिम नहटेको स्थानिय रामलताश्रेष्ठ बताउँछन् । श्रेष्ठका अनुसार यस मूर्तिको सुरक्षाका लागि उचित मन्दिर बनाएर राखिनु पर्छ । “यो ठाउँमा पहिले पनि उमा–महेश्वरका ससाना मूर्ति प्रशस्तै चोरी भएका छन्,”श्रेष्ठ भन्छन्, “हेर्दा लेउ पलाएको, फ्यालिएको देखेर अहिलेसम्म बचेको होला । नत्र यस्तो महत्वको मूर्ति खुल्ला ठाँउमाके राख्थे ?”
इतिहास बोल्ने यस्ता मूर्ति कम्तिमा पनि स्थानियको पहिलो प्राथमिकतामा हुनु पर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुरातत्व केन्द्रिय विभागका प्रमुख डा मदनकुमार रिमाल औल्याउँछन्। हजारौँ हजार मूर्ति चोरि निकासी भइसकेको कैयौं मन्दिर रित्तिरहेका छन् । “यद्यपी सचेत भएर यस्ता महत्वपूर्णमूर्ति बचाँउन साइरन, चिफ, पूर्ण अभिलेखराख्न सबै निकाय चुकेका छन्,”सम्पदा संरक्षण अभियन्ता रोशन मिश्रचिन्ता व्यक्त गर्छन् ।
किन बचाउनु पर्छ ‘गजलक्ष्मी’?
खुट्टामा ठूल्ठूला कल्ली, कानमा उस्तै कुण्डल, भद्दा कम्मर, फुकेको स्तन र तलतिर झरेको पटुका लिच्छविकालभन्दा अघिका पोसाक,गरगहना र शृंगार प्रसाधन भएकोग्रन्थकार डा.वीणा पौड्याल बताउँछिन् । दुई चुल्ठी बाटेर कानभन्दा माथि दोबरी बनाएर बाँधिएको कपालको ढाँचाले काठमाडौँ उपत्यकामा पछिसम्म यस्तै संस्कार रहेको इतिहासकार मोहनप्रसाद खनालले ..... मा उल्लेख गरेका छन् ।
साथै यस मूर्तिले ईशा पूर्वदेखि नै शक्ति उपासनाको परम्परा प्रचलनमा रहेको प्रष्ट बुझिने लैनसिंह वाङ्देलले गजलक्ष्मीबारेको अनुसन्धानमूलक लेखमा उल्लेख गरेका छन् । यसरी लिच्छविअघिकोे जीवनशैलीमा दुरुस्तै उतारेको गजलक्ष्मीमूर्तिको सुरक्षा पर्याप्त छैन ।“वर्षांैदेखि कुनामा फ्याँकिएको मूर्ति उठाएर फलामको पर्खाल त लगाइयो,” पुरीलाईचिन्ता छ, “तर पुरातत्व विभाग र स्थानियले यसलाई सुरक्षा नदिए मूर्ति भोलिनरहन पनि सक्छ । ”
चोरीको चंगुलमा बासुकी नाग
८ वैशाख मध्य राति १२ बजे साँगाको गःहिटि ढुंगेधारामासामान फुटेको आवाज आयो । भोलिपल्ट बिहान स्थानिय भुवन न्हुच्छें प्रधानले अघिल्लो रातको आवाज ढुंगेधारामा रहेको बासुकी नागको मूर्ति चोर्न प्रयास भएको पत्ता लगाए । लिच्छविकालीन उक्त मूर्ति झिक्न मूर्तिको छेउकुनामा भालाले घोपिएको थियो । केही इँटा फुटेकाथिए । तर त्यसरात मूर्ति चोर्ने प्रयास विफल भयो । देउताबचे । “त्यसपछि पनि मूर्ति चोर्ने प्रयास भएका छन् । तर झिक्न नसक्दा नजिकका धारा र त्यसका सयौँ टुटिहराएका छन्,” प्रधान भन्छन् ।
ललितपुरस्थित कुम्भेश्वोर धाराको भित्तामा
नमूना उमा महेश्वोर (मृत्‍युन्ज्य) को मूर्ति
४३ वर्ष पहिलेपनि बासुकी नाग छेउबाट दुइटा गणेशका मूर्तिहराएका थिए । ५० मिटरवरपरनै अर्को लक्ष्मीनारायण मूर्ति हराएको थियो। यसरी बारम्बार गःहिटिमा चोरी भइरहने र विशेष बासुकी नागको मूर्तिमा बारम्बार चोरीको प्रयास हुँदा पनि पुरातत्व विभागले कुनै चासो नदिएको स्थानिय बालकृष्ण श्रेष्ठ गुनासो पोख्छन् ।
कलात्मक मूल्यका कारणबासुकीको मूर्ति किम्ती भए पनि सुरक्षित भने नभएको ‘कल्चर ग्रुप अफ साँगा’का रोजन न्हुच्छेंप्रधान बताउँछन् । “सुरक्षाका लागि साइरन,सिसि क्यामेरा,वरिपरि गेट लगाउन खोजेपनि न पुरातत्वन त स्थानियलाई चासो छ । सर्तकता पनि शून्य छ । कुनै दिन यस्तै खेलाँचीले भगवान् हराउने डर छ,” उनी भन्छन् । यसकारण विशेष छन्, बासुकी नाग
शिरमा पञ्चनाग,ध्यानमुद्राको आवरण र चिप्लो ढुंगाले बत्तीझैँ बलेका भगवान् विष्णु । लिच्छविकालीन कालो ढुङ्गाबाट बनेको यस मूर्तिलाई पटकपटक हत्याउने कोसिसभइरहेको छ । जति धेरै जानकारी दियो,उति नै हराउने जोखिममा रहने सम्पदा संरक्षण अभियन्ता रविन्द्र पुरी बताउँछन् ।
नागहरुका पनि राजा बासुकीको नियमित पूजा गर्नाले कालसर्पयोग टर्ने जनविश्वास छ । बासुकी नाग भगवान् शिवको गलामा हुन्छन् ।विशेष गःहिटिकानाग पुज्न नागपञ्चमीमा भक्तजनहरुको घुइँचो लाग्छ । भित्ताको कुनामा टाँसेर राखिएको मूर्तिलाई स्थानियहरुले एक तगारीसिमेन्टले पोतेर अड्याएर छाडेका छन् । “खासमा स्थानीय सरकारले सानो मन्दिर र घेरा हालिदिए हाम्रा मूर्ति बच्ने थिए,” स्थानीय बालकृष्ण श्रेष्ठ भन्छन्,“यस्ता मूर्ति गुमे हाम्रो त चाड, जात्रा र संस्कार नै गुम्छ ।”
उमामहेश्वर(मृत्युञ्जय) को मूर्ति
ललितपुरको कुम्भेश्वर धाराको पश्चिमपट्टि भित्तामा ओत लागेर उभिएको छ, उमामहेश्श्वरको मूर्ति । मूर्तिका जानकार व्यक्तिहरुलाई उमामहेश्वरको मूर्तिको चर्चा कुनै नौलो विषय हैन । तर नेपालभरका अनेक ठाँउमा भएका उमामहेश्वरको मूर्तिभन्दायो फरक छ । यसलाई मल्लकालको उत्कृष्ट नमुना मूर्तिकारुपमा बुझ्नुपर्छ । “त्यसैले यो जानकारी धेरै फैलियो भने पनि चोरी होला भन्ने डरमा छिन्ग्रन्थकार डावीणा पौडेल । भन्छिन्, “चोरिको डरले नेपालको गर्विलो कलाकृति सधै लुकाएर राख्नु पनि उचित होइन । संरक्षण गर्नेले तादरुकता देखाउनु पर्‍र्यो।”
डा पौडेलका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा ईशाको दोस्रो शताब्दीदेखिका उमामहेश्वरलगायत विभिन्न भगवान्का दर्जनौं मूर्ति छन् । काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरबाट पाटन दरबार क्षेत्रसम्म पुग्दा मात्रै झण्डै आधा दर्जन प्राचीन एवं लिच्छविकालीन मूर्तिहरू बेवारिसे अवस्थामा भेटिन्छन् । असन, वसन्तपुर, पशुपति, धुम्बाराही, हाँडीगाउँ जस्ता क्षेत्रमा महत्वपूर्ण मूति पनि यत्रतत्र छरिएरै रहेका छन् । ती मूर्ति जुनसुकै बेला पनि चोरी हुनसक्ने जोखिम छ । तर त्यसमा पनि विशेष उमामहेश्वरको मृत्युञ्जयको शैली महाअमूल्य छ ।
फलकबीचको भागमा कुँदिएका शिवपार्वतीको बसाई र हातमा लिएको कुम्भ,शैलीका अन्य मूर्ति नेपालमा बनेकै छैनन् । चौधौँ र पन्ध्रौँ शताब्दीमा बनेका यस मूर्तिलेकालका पनि काल शिवको आराधनाबाट मृत्युलाई जित्न सकिने भाव देखाएको छ ।त्यसैले यो नमुना मूर्तिकोविशेष सुरक्षा आवश्यक छ ।
मूर्ति संरक्षणकै लागि केहि समय अघि सिसि क्यामेरा जडान गरे पनि यो पर्याप्त सुरक्षाको नभएको स्थानिय रामेश महर्जन बताउँछन् । “यत्रो एरियामा जम्मा १÷२ वटा सिसि क्यामेराले यस्तो बहुमूल्य मूर्ति चोरि हुनबाट के बच्थ्यो होला,” उनको सशंय छ, “नेपालमै उमामेश्वरको नमुना मूर्ति बचाउने अभियान नै चाले त सबै सजग हुन्थे कि ?”
हुन त नेपालीमा घरआँगनका देउता कसैले सुटुक्कउधिनेर रातारात समुद्रपार पुर्‍याउने डर आजको मात्र होइन ।सन् १९६० को दशकदेखि नेपालबाट महत्वपूर्ण मूर्तिहरू हराउने सिलसिला चलेको थियो । १९८० को दशकमा यसले व्यापकता पायो । यस बीचमा झण्डै ५०० को हाराहारीमा ऐतिहासिक मूर्ति एवं टुँडालहरू हराएको पुरातत्व विभागको अनुमान छ ।
ऐतिहासिक मूर्ति वा अभिलेखका लागिसुरक्षाको न्यूनतम आधार तय गर्न साइरन वा सिसिक्यामेरा जडानका लागि पुरातत्व विभागले बजेट छुट्टाउँदैन ।यस्ता सम्पदाहरुको जगेर्नाएक्लो पुरातत्व विभागले गर्न नसक्ने विभागकानिर्देशक दामोदर गौतम बताउँछन् ।“बेवारिसे र जोखिममा रहेका यस्ता सम्पदा संरक्षणका लागि काठमाडौँमा भएको पुरातत्वविभाग देशैभर पुग्न सक्दैन,” गौतमभन्छन्, गौतम भन्छन, “अहिले स्थानिय, प्रदेश र संघिय सरकार छन् ।संघीयता यसैका लागि हैन र ! पहुँच घरघरमा । सुरक्षा गाँउगाँउमा ।”
पुरातत्वका तीन अभियान
निर्देशक, पुरातत्व विभाग
पुरातत्व विभागले अहिले देशैभरका मूर्तिहरुको अभिलेख राख्ने काम गरिरहेको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका आधाजसो मूर्तिको रेकर्ड राखिसकेको छ भने उपत्यका वाहिरका जिल्लाहरुमा काम सुरुभएको छ । कुन ठाउँमा कुन मूर्ति, कहिलेकोकुन धर्मसँग सम्बन्धित, कुन म्यूजियमका वस्तु,वास्तुकला, फोटो र सुक्ष्म विवरण यसमा भरिन्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा मूर्तिको प्रमाणीकरण समेत सुरुभएको छ । बिना प्रमाणीकरणबिनाकामूर्तिहरु देशबाहिर लैजान रोक लगाइएकोछ । तर चारैतर्फ खुल्ला सीमा भएकाले मूर्ति चोरी रोक्नु चुनौतिपूर्ण छ ।
विभागले मुख्यतीन सिद्धान्तबाट काम गरिरहेको छ । पहिलो भएका मूर्तिको संरक्षण, दोस्रो चोरिएका देवदेवी फर्काउने अभियान र अन्तिम अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिक पहल । जसबाट आजसम्म ६० वटा मूर्ति फर्किएका छन् भने २३ वटा फर्कने प्रकृयामा छन् । नेपालसँगहरेक मूर्तिलाई बचाउन विदेशमा जस्तो मूर्तिमै ‘चिफ’ लगाउने क्षमता छैन ।त्यसैले चोरीको घटना हुनै नदिन स्थानिय सरकार, घरगाँउ र टोलको सक्रियता चाहिन्छ ।
डोल्पामा चोरी हुने मूर्तिबारे विभागलाई जानकारी नै नहुन सक्छ । पूर्खाले एकपछि अर्को गरि समाजलाई हस्तान्तरण गर्दै आएको चित्रनै कला हो । यो बचाउने पहिलो जिम्मा स्थानीयकै हो । त्यसपछि पहुँच र संरक्षण गर्न विभागले बनाएको रणनीति काम लाग्छन् ।
अहिलेलाई विभागले विश्वव्यापी हुने नेपालको मूर्तिकलाका पुस्तक छापेर यसको पहुँच बढाइरहेको छ । सम्पदा अभियन्ताहरुको अनुसन्धानमा सहयोग गर्दै बेचिएका मूर्ति र्फकाउनु अघि चोरी हुनै नदिन जनमानसमा हाम्रा कला, वास्तुकला, मूर्तिकलाले के कस्तो महत्व राख्छन् भनेर प्रेरणा दिने सामग्री बन्दैछन् । अहिले अस्तव्यस्त रहेका मूर्तिहरुको अभिलेख नै देशव्यापी बन्छ । त्यसपछि हराएका मूर्ति हाम्रा हुन् भन्ने प्रमाण बल्ल जुटछ ।